तिमी दलित भएकोले मर्यौ साथी - Dalit Online
२१ आश्विन २०७५, आईतवार १५:१३
अमिल्दो उमेर । अनमेल क्लास । जातको बन्धन । त्यो कोणले हामी दौंतरी थिएनौ । र, पनि हामी मनमिल्दो साथी थियौं । मोजाको फुटबलले हाम्रो दौंतरी जोडेको थियो । उमेर, जात र वर्ग नमिलेपनि गाउँकै ब्रम्हचारिणी निमावि (गोरखा, पान्दुङ–२) ले दिल (रम्तेल ) तिम्रो र मेरो भेट गराईदिएको थियो । पछि त्यहि स्कुल नै हाम्रो बिछोडको थलो बनिदियो ।
म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन, त्यो कालो दिन जसले हाम्रो मित्रताको धागो चुँडाईदिएको थियो ।
अझै मन कटक्क दुख्छ ,त्यो दिन सम्झँदा जुन दिन हामी अनाहकमै कक्षा छाडेर रमिता हेर्न स्कुलको हाता नाघेका थियौं । नजाने पनि कुनै कारण थिएन । अरु सबै साथीहरु पनि त गएकै थिए । पहिलो पल्ट पुलिसले मान्छे समातेको समाचार हाम्रो कानमा आईपुग्यो । सूर्य ज्योति मा.वि.का प्रअ वीर बहादुर गुरुङ्गलाई माओवादीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको सुन्यौं । हुल बाँधेर मान्छे गए प्रहरीले छादिदिन्छन् भनेपछि हामी पनि त्यता लाग्यौं ।
त्यहाँ पुग्दा अजिवको रमिता थियो । प्रहरीले बीर सरलाई घिसार्दै लगिरहेका थिए, अभिभावक र विद्यार्थी ढुङ्गामुढा गर्दै पछिपछि लागिरहेका थिए । दिल याद छ, तिमी र म पनि त्यो भीडमा मिसियौं जहाँको वातावरण निकै तनावपूर्ण थियो ।
मेरो कोख चसक्क चस्क्यो । तातो महसुस भो । च्याप्प छामे । त्यहाँबाट भलभल खुन बगिरहेको थियो । प्रहरीले चलाएको गोलीले मेरो कोख छेडेर गएको रहेछ । यसो हेरेको माथिल्लो गरामा तिमी लडेर छटपटाईरहेका थियौं । पीडाले असह्य भैरहेको थियो । तर साथी म तिमीलाई भेट्न हुर्रिदै माथिल्लो गरा उक्लिन असफल प्रयास गर्दाे रहेछु । कसैको नजर लागेछ क्यार ! त्यतिबेला गोलीले पनि हामी दुई दौंतरीलाई नै छानीछानी खोजे झैं लाग्यो ।
प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएपछि मान्छेको भागामभाग चलिरहेको थियो । सबै चिच्याईरहेको सुनिन्थ्यो । एकछिनमा गाउँलेसंग बुवा आउनु भो र मलाई उठाएर लग्नु भो । दिल तिमी नछुने जात भएकै कारण कसैले हात लगाउन खोजेनन । दलितलाई छोए जातच्यूत होइन्छ भन्ने सामाजिक कुरिति मान्छे मान्छेको दिमागमा थियो । त्यसैले त्यस्तो बिपत्तिको बेलामा पनि कसैले तिमीलाई उठाएनन । मैले हेरिरहे मात्र गर्न केहि सकिन । सामाजिक चिन्तनले मान्छे कसरी कथपुतली हुँदारहेछन् भन्ने मैले पहिलोपटक प्रत्यक्ष भोगेको त्यहिं हो ।
राम प्रसाद भट्ट (जनयुद्धको पहिलो घाईते )
हामीलाई साढे दुई बजेतीर गोली लागेको थियो । मलाई हतार हतार अस्पताल दौडाईयो । साढे तीन बजे गोरखा सदरमुकाम पुगिसकेका थियौं । त्यहाँबाट पाँच बजेभित्र हेलिकप्टर काठमाण्ठौ आईपुग्यो ।
काठमाण्डौ ओर्लिदा सुने तिम्रो बुवाले आफन्त जम्मा गरेर आउँदा तिमी त्यहि गरामा लडिरहेका थियौ रे । गोलीको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो मैले भोगिरहेको थिए । तर तिमीले समाजले दिएको थप पीडा पनि संगसंगैं पचाउने प्रयत्न गरिरहेका थियौं । म कल्पना मात्र गर्नसक्छु, त्यत्रोे प्रतिरोधक क्षमता तिमीले कहाँबाट प्राप्त गरेका हौंला ?
पाँच बजे म काठमाण्डौ ओर्लिसकेको थिए । तिमीलाई त्यहाँबाट भर्खर उठाउने तरखर भैरहेको थियो । सुनेर मन कटक्क खायो । यता मेरो उपचार चलिरहेको थियो उता तिमी पीडाले छट्पटिईरहेका थियौ । तिम्रो सुर्ताले म हरपल तिम्रो बारे सोधिरहेको थिए । राती नौ बजे दुःखद खबर सुन्नु पर्यो । उपचारकै क्रममा गोरखा जिल्ला अस्पतालमा तिमीले हामीलाई छाडेर गएछौं । मलाई एक्लो बनाई गएछौ । म स्तब्ध थिंए ।
२०५२ साल फागुण २ गते माओवादीले जनयुद्ध गरेको १२ दिनपछि हामी दुई दौंतरीले गोली खायौं । नाबालक हामीलाई के थाहा तर हामी देशको राजनीति उथलपुथल पार्ने सशस्त्र संघर्षको अभिन्न अंग बनि ईतिहासमा दर्ज भयौं । दश बर्षीय बालक तिमी सशस्त्र संघर्षको पहिलो शहिदमा दरियौ । म पहिलो घाईतेको किताब बोकेर बाँचिरहेकोछु । तिमीले कसरी सोंच्छौ तर मलाई चाहिं कहिलेकाहिं यो उपाधिले गिज्याए झैं लाग्दछ ।
तिमी त गयौ । म उपचारपछि स्कुलमा फर्किएपनि घाउको आलो सन्चो नभएर त्यहाँबाट पीप निस्कन्थ्यो । साथीहरुले ‘रामे अब मर्छ ‘ भन्दै जिस्काउँथे । आजभोली समाजले ‘जिउँदो शहीद’ भनेर गिज्याउँछन् । यसो गम्दा ईतिहास दोहोरिए जस्तो पनि लाग्दछ । हिंजो आततायी राणाशासनको विरोधमा उत्रिएका चार शहिदहरु नेवार भएका कारण मृत्युदण्ड काविल भए । बाहुन भएका कारण रामहरि शर्माहरुलाई ज्यान बख्स दिईयो र जिउँदो शहिद कहलाउन योग्य ठानियो । यो चिन्तनको भारीले मलाई अहिले पनि थिचिरहेको जस्तो लाग्दछ ।
माओवादीको दश बर्षे जनयुद्धले सत्ताको संरचना बदलिएको छ । गणतन्त्र आएको छ । पात्र फेरिएका छन् । जनयुद्धका नाईकेहरु सत्तासीन छन् । तर के संरचना बदलिएको छ त ? यो सत्ता निर्माणमा मेरो अभिन्न मित्र दिल रम्तेलको बलिदानी छिपेको छ । मेरो खुनको बलिन्द्रधाराले सिंचन गरेको छ ।
दिलबहादुर रम्तेलका बाबु सेते रम्तेल र आमा सरीमाया रम्तेल
साथी गोलीले जर्जर बनाएको मेरो ज्यान अझै निको भइसकेको छैन । बिसेक होला भन्ने पनि लाग्दैन । नियमति औषधि खाएर जिवनयात्रा घिसारिरहेको छु । म बारम्बार गम्छु र बर्बराउँछु – हाम्रो सामाजिक संरचनाले तिम्रो बध गर्यो त्यहि संरचनाले मलाई उद्दार गर्यो । तर म बाँचेर जे देखिरहेको छु, जे भोगिरहेको छु । कहिलेकाहीँ त लाग्छ बरु तिमीसंगै मरेर गएको भए यत्रो सास्ती त भोग्नु पर्दैनथ्यो । म तिम्रो घर हेर्छु । हामी पढेको खेलेको चौर चहार्छु । समाज नियाल्छु । अहँ केहि बदलाव छैन । ब्यवस्था बदलिएको छ, संरचना जहिंको तहिं छ जहाँ तिमीले छाडेर गएका थियौ ।
जनयुद्धको १० वर्षे अन्तरालमा हाम्रो जस्तो हजारौ परिवारको काँधमा पीडा थपियो । तिमी जस्ता हजारौं मरे, म जस्ता हजारौ घाइते बने । आज पनि छोरा गुमाएका हजारौ आमाबुबाहरु आफनो सन्तानलाई किन मारियो भन्ने जवाफको प्रतिक्षामा छन् । अझै कति कुर्नुपर्ने हो , त्यो थाहा छैन । तर तिम्रो सम्मानको लागि र हामीले पाउनुपर्ने न्यायको लागि म सदैव लड्ने प्रणमा छु । निरन्तर आशा जगाइदिने तिम्रो अनुहार म सधैं सम्झिन्छु । त्यहि निष्कलंक, निर्दाेष र उत्प्रेरक चेहराले मलाई बाँच्ने आधार दिएको छ । मित्र म तिमीलाई वध गर्ने साँस्कृतिक सत्ताको मनोबल तोड्न पनि दुस्खपर्यत्न यो मर्त्यलोकमा प्रतिरोधको जिन्दगी बाँच्न अभिशप्त छु ।
प्रकाशित | २१ आश्विन २०७५, आईतवार १५:१३
विभेदबारे राजेश हमालको सन्देश